Ukuhlolwa kwamandla kagesi kagesi emanzini - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukuhlolwa kwamandla kagesi we-dielectrical emanzini okunye okubizwa ngokuthi ukuhlolwa kwamanzi okuguga ngaphansi kwamanzi ukukala ukuthembeka nokuxhuma kwezixhumi zokubhoboza ikhebula ngamandla aphansi, aphakathi naphezulu emanzini. Siqhubeka nalokhu kuhlola kuzixhumi zokubhoboza ezifakelwe amandla kagesi aphansi, izingxobo zekhebuli ezifakiwe kanye nezindwangu zokuphela ezingavunyelwe.
Lokhu kuhlolwa kulingisa izimo zezulu zemvula eqhubekayo nomswakama omkhulu. Sifaka ama-conductor conductor ethangeni elibonakalayo elinamanzi afanele, bese simisa i-voltage ephezulu nokukala ukuxhumana. Isilinganiso se-voltage nesikhathi kunamanani ahlukile ngokuya ngamazinga EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi. Ngokuhlolwa kokulingisa ukuqinisekisa ukuthi izinga eliphezulu lokufakwa kwezixhumi zikagesi ngaphansi kwamandla kagesi, imithwalo kagesi, kulingisa isikhathi sokusetshenziswa.
Izinga lethu lokuhlola elisuselwa ku-CENELEC, N 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 futhi sisebenzisa ukuhlolwa kwamazinga okulandela emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuqalisa, kanye nokulawulwa kwekhwalithi yansuku zonke, ukuze siqiniseke ukuthi okwethu ikhasimende lingathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.